Uyisebenzisa kanjani iNtlanganiso yoSondiso ukuRekhoda undwendwe olukude kwiPodcast yakho kwiiNdlela eziHlukeneyo | Martech Zone
Andinakukuxelela zonke izixhobo endizisebenzisileyo okanye endizibhalisileyo kwixa elidlulileyo ukurekhoda udliwanondlebe lwePodcast ukude- kwaye bendinengxaki nazo zonke. Kwakungenamsebenzi ukuba ulungelelwaniso lwam lulunge kangakanani okanye umgangatho wehardware… imiba yokunxibelelana engaphakathi kunye nomgangatho weaudio phantse ibisoloko indenza ukuba ndiphose ipodcast.
Isixhobo sokugqibela endisisebenzisileyo yayiyiSkype, kodwa ukwamkelwa kwesicelo bekungasasazeki kangangokuba iindwendwe zam bezisoloko zinemiceli mngeni yokukhuphela kunye nokusayinela iSkype. Ukongeza, ngeloxesha kwakufuneka ndisebenzise ukuthengwa Yongeza i-Skype ukurekhoda nokuthumela ngaphandle nganye yomkhondo.
Zoom: Umhlobo ogqibeleleyo wePodcast
Umntu endisebenza naye wayendibuza ukuba ndizirekhode njani iindwendwe ezikude ngenye imini kwaye ndimxelele ukuba ndiyazisebenzisa ZoomIsoftware yokuhlangana. Ukhe wabethwa ngumoya xa bendimxelela ukuba kutheni… ukhetho kwi-Zoom likuvumela ukuba uthumele ngaphandle undwendwe ngalunye njengengoma yabo yomculo. Yiya ku Useto> Ukurekhoda kwaye uya kufumana ukhetho:
Xa ndirekhoda udliwanondlebe, ndihlala ndigcina iaudiyo kwikhompyuter yalapha. Nje ukuba udliwanondlebe lugqityiwe, Zoom ithumela ngaphandle iaudio kwisikhangeli sasekhaya sokurekhoda. Xa uvula indawo ekuyalelwa kuyo ifolda, uya kufumana umkhondo ngamnye okwifolda ebizwe ngegama kwaye emva koko kufakwe umkhondo womthathi-nxaxheba:
Oku kundenza ndikwazi ukungenisa ngokukhawuleza nganye yeengoma ezivakalayo kwiGarage yeband, ndenze ulungiso olufanelekileyo lokususa ukukhwehlela okanye iimpazamo kwindlela endiyifunayo, ukongeza ii-intros kunye ne-outros, emva koko ndikhuphele ngaphandle umphathi wam we-podcast.
Ndingacebisa kakhulu ukuba ugcine ukondla ividiyo yakho ngexesha lePodcast! Njengokuba ndithetha nendwendwe lam, ndiyakholelwa ukuba ividiyo esiyithathayo isongeza itoni yobuntu kwincoko. Ukongeza, ukuba ndikhe ndafuna ukuba ngenye imini ndipapashe iividiyo zeepodcasts zam, bendiya kuba nazo neevidiyo ngokunjalo!
Okwangoku, ukugcina ipodcast yam ngumsebenzi owaneleyo, nangona kunjalo!
tags: iingoma audiothumela iingoma zomsindopodcastPodcastingimikhondo eyahlukileyoyenza nkuluzoom ukurekhoda